ब्राह्मणहरुले किन खाँदैनन् लसुन र प्याज ? यस्ताे छ धार्मीक कारण - Prathana Media
ब्राह्मणहरुले किन खाँदैनन् लसुन र प्याज ? यस्ताे छ धार्मीक कारण
प्रार्थना मिडिया	 प्रकाशित मिति Aug 2, 2020
धार्मिक मान्यताका कारण भन्दै केही मानिसहरु लसुन र प्याज खाँदैनन् । विशेषगरी ब्राह्मणहरू लसुन प्याज खाँदैनन् । यसरी नखानुका वैज्ञानिक र धार्मिक कारण के के छन् जान्नुहोस्।
आयुर्वेदका अनुसार खाद्य पदार्थलाई तीनवटा श्रेणीमा बाँडिएको छ : सात्विक, राजसिक र तामसिक । सात्विक भोजनले शान्ति, संयम, पवित्रता र मनको शान्ति दिलाउँछ भने राजसिक खाद्यपदार्थले मोह तथा खुशीको भाव दिन्छ । त्यस्तै तामसिक भोजनले क्रो’ध, अ’हंकार र वि’नाशजस्ता भाव पैदा गर्छन् ।
ब्राह्मणले पवित्रता राख्नु जरूरी हुन्छ किनकि उनीहरू देवताको पूजा गर्छन् र प्राकृतिक रूपमा शुद्ध हुनुपर्छ
प्याज र लसुनलाई राजसिक र तामसिक पदार्थ मानिएको छ । यसको अर्थ यिनले अज्ञानता र क्रो’ध बढाउँछन् । मासु, लसुन र प्याजको अधिक ‘सेवनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ । यसले का’मोत्ते’जना बढाउँछ । ब्राह्मणले पवित्रता राख्नु जरूरी हुन्छ किनकि उनीहरू देवताको पूजा गर्छन् र प्राकृतिक रूपमा शुद्ध हुनुपर्छ ।
सनातन शास्त्रहरूले प्याज र लसुन जस्ता खाद्यपदार्थले प्रकृतिप्रदत्त भावनामध्ये सबभन्दा खराब भावना पैदा गर्छन् । उत्ते’जना र अज्ञानतालाई वृद्धि गर्ने यस्ता खानेकुराले आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्न दिँदैनन् र व्यक्तिको चेतनामा नकारात्त्मक प्रभाव पार्छन् ।
ध्यान र भक्तिमा लाग्ने व्यक्तिले लसुन प्याज खानै हुँदैन । काँचो लसुनमा बोटुलिजम ब्या’क्टेरिया हुनाले स्वास्थ्यलाई हानि पु-याउँछ । प्राचीन रोमन कवि होरेसले लसुनलाई वि’षभन्दा खराब भनेका छन् ।
आयुर्वेदले पनि यौ-नशक्ति वृद्धिका लागि लसुन प्याज खान सिफारिस
हुनत लसुन प्याजले स्वास्थ्य बढाउँछन् र यी प्राकृतिक एन्टीबायोटिक हुन् भन्ने मान्यता पनि छ । तर अध्यात्ममा लागेकाहरूले लसुन र प्याज त्याग्ने सल्लाह दिन्छन् किनकि यिनले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उ’त्तेजित गर्छन् ।
आयुर्वेदले पनि यौ-नशक्ति वृद्धिका लागि लसुन प्याज खान सिफारिस गरेको छ । त्यसैले अध्यात्ममा लागेका ब्राह्मणले लसुन प्याज खानु उचित हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।